Paka 2015 ao Antsirabe mikendry ny ho tsara hatrany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hiditra ao anatin’ny Herinandro Masina isika. Midika izany fa efa akaiky ny fetin’ny Paka. Fety lehibe tokoa ho an’ny kristianina. Midika ihany koa fanomanana ny fety aman-danonana raha ho an’ny tanànan’Antsirabe manokana. Isan’ny mampalaza an’Antsirabe ny fankalazana ny fetin’ny Paka raha ohatra ka fetin’ny trozona ho an’i Sainte Marie na Nosy Boraha ohatra. Efa tsindriandaona ny rehetra amin’izay fandaharam-potoana ny ampitson’ny Paka. Hitsangatsangana, hitotorebika, hihaona ny mpianakavy sy ny mpinamana…
Gara, Andraikiba, Tritriva
Ny manoloana ny gara izao no toerana isan’ny malaza eto Antsirabe rehefa andro fety na hilanonana. Tsy nivaona amin’izany ny amin’ity taona 2015 ity. Ho avy eo amin’ny gara ireo mpanakanto mpihira sangany sady ankafizin’ny vahoakan’Antsirabe, ka i Njakatiana sy ny tarika Ambondrona ary i Samoela no hanamasaka ny hetsika amin’ireo andro maromaro ireo. Ny orinasa STAR Antsirabe no mikarakara sy manohana izany seho maro isankarazany izany. Namandri-toerana dieny mialoha ihany koa ireto mpivarotra ireto te hanara-dalàna sao dia tsy hahazo toerana amin’ny fety. Tsapa fa mibosesika tsy manara-dalàna ny mpivarotra sasany rehefa tena ao an-katoky ny Paka ka mananosarotra ny fifandaminana araka ny fahita saika isan-taona. Manoloana izany dia nametraka fepetra mazava tsara ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fitandroana ny filaminana mba hisorohana ny fandikan-dalàna mety hitranga. Fampisehoana tsy handoava-bola ny eny amin’ny gara. Tombony izany ho an’ny olona mandalo fahasahiranana. Manahy noho izany ny mpivarotra sasany fa mbola hifantoka amin’ny fanarenana ny simba noho ny orana ny ankamaroan’ny olona ka mety tsy handany vola loatra. Miezaka hatrany anefa ireo mpivarotra manomana izay tsara ho haroso.
Andraikiba sy Tritriva ihany koa no mampalaza an’Antsirabe rehefa Paka. Amin’ity 2015 ity dia ho tonga hampikorana ao amin’ny EKAR paroasin’Andraikiba ny tarik’i Rajao Mianakavy. Sambany izao no hisy lanonana makotrokotroka hiarahana amin’ity ekipa sady mpanakanto no mpilalao sarimihetsika ity ao an-toerana ka heverina fa ho hipoka sy hamovoka indray ny kianja. Ho avy hanao fampisehoana ao Andraikiba ihany koa ny tarika Theo Rakotovao sy i Dama Mahaleo ka samy manantena ny rehetra fa hahafinaritra ny Paka 2015.
Mpanararaotra andro fety
Mikononkonona ny hampiakatra saran-dalana sahady ireo mpamily taksibe ao Antsirabe. Mikasika ny zotra reziônaly sy nasiônaly kosa, dia efa nasiana fivoriana manokana tamin’ny herinandro teo ny mikasika ny fisondrotana. “Hisondrotra enina arivo sy iray alina ariary ny saran-dalana Antsirabe-Antananarivo” hoy ny fanazavan’i Olivier Razafindrakoto mpamily takisiborosy zotra reziônaly. Tapaky ny fikambanan’ny kaoperativam-pitaterana ao Vakinankaratra izany nandritra ny fivoriana ka tsy maintsy hajain’ny kaoperativa tsirairay. Ny antony dia tsy noho ny gazoaly loatra, fa akaiky ny fety ka mila manararaotra izany ireo fiara mpitatitra araka ny filazan’ity mpanera iray ity. Fa anisan’ny olana mianjady amin’ny vahoaka ao an-toerana, rehefa fety goavana tahaka izao, dia ny taksibe. Mitaraina ireo mpandeha satria hasondrotr’ireo mpamily diman-jato ariary ny saran-dalana amin’ny andro fety raha toa ka telon-jato ariary izany amin’ny andavanandro. Ankoatra izay, nolazain’ireo mpandeha fa tsy tonga any amin’ny toeram-pihodinana farany ara-dalana ny ankabeazan’ireo fiara ireo, fa misapotona antsasa-dalana. Izany indrindra no ilàna mpitandro ny filaminana mba handamina ny lafin’ny fifamoivoizana, matetika manko ny akaiky fety toy izao no tena betsaka ny loza samihafa miseho. Na izany na tsy izany, tsara ny malina sy mitandrina mandrakariva. Ho hentitra ihany koa ny fisavana amin’ity araka ny fanazavan’ny tao amin’ny polisim-pirenena ifotony Tsarasaotra. Voarara mafy ary mety hiharan’ny lalàna mihitsy aza izay tratra mitondra môtô mirimorimo sady tsy manao aroloha amin’izao an-katokin’ny Paka izao. Raràna ihany koa ny manao sesi-boletra mpandeha, na dia efa tsy antonina aza ny taksibe. Ny hirariana anefa dia mba hipàka any amin’ny tsirairay ny toromarika ka tsy hisy hivilana fa samy hanao fety am-pilaminana na ny olon-tsotra na pôlisy. Mba ho tsaroana sy ho tsapa amin’io Paka io izany fiadanana nomen’i Kristy.